Nyocha | October 2021
Isi > Nyocha
amamiihe anyịnya igwe astor nyochaa
Amamiihe anyịnya igwe astor review - esi nweta
Ndi igwe mara mma di nma? Na a nutshell, na Amamiihe Bikes Amamiihe Bicycle Co l-Train dị ukwuu. Imirikiti nyocha ya dị mma. Otu n’ime atụmatụ ya pụtara ìhè bụ na ọ na-efegharị n’elu okporo ụzọ dị larịị ma ọ bụ nke nwere olulu. All ekele ya chromoly etiti na ndụdụ, nke na-eme igwe kwụ otu ebe ma na-enwe oké ujo absorption. 10.03.2021
theragun pro nyochaa
Theragun pro nyochaa - otu esi edozi
Theragun Pro ọ bara uru? Na mkpokọta, Theragun PRO bụ ezigbo egbe ịhịa aka n'ahụ. Enwere m mmasị na mmelite niile m hụrụ na ahụ m mgbe m na-eji ya ogologo oge. Site n'iji Theragun emeghere m oke ịtọhapụ mgbatị na akwara dị iche iche n'akụkụ ahụ m. Emekwakwala m ụdị njem m ji arụ ọrụ na nkwonkwo ụfọdụ.
enve ụkwụ nyocha
Enve ụkwụ nyocha - chọọ ngwọta
Ebee ka a na-eme wiilị ENVE? Ogden, Utah
nkebi ike mita nyochaa
Nyocha nke mita nyocha - otu esi edozi
Ọkwa usoro mita mita ziri ezi? Maka ntụnye, Ọnọdụ LR nwere ọnụego ziri ezi nke +/- 1.5%. Ọ dịghị achọkwa ihe ndọta ọ bụla maka ịdị ọcha, yana na-emezigharị na-akpaghị aka maka ọnọdụ ikuku ọ bụla. Ihe abụọ ndị a mara mma ọ bụ ezie na n'ọtụtụ mita ike n'oge a.
mechie skinz uwe nyocha
Akara skinz gloves nyochaa - olee otu ị ga-esi dozie
Sealskinz gloves ọ dị mma ọ bụla? Maka iji oge oyi eme ihe, ndị a Sealskinz Gloves dị mma ruo ihe dị ka ogo 25 ma ọ bụrụ na ị na-arụsi ọrụ ike n'oge oyi ma ọ bụ na-agba ịnyịnya snow ma na-enye nnukwu ihe ọzọ maka uwe aka ajị anụ n'ihi na ha agaghị enwe mmiri ma ọ bụrụ na ha abanye na snow.
lumos okpu agha nyochaa
Lumos okpu agha review - viable solutions
Okpu okpu lumos ha dị mma? M hụrụ okpu agha a n'anya. Ọ dabara n'isi m n'ụzọ zuru oke ma bụrụkwa okpu agha kachasị mma m nwere. Ruo ugbu a ihe niile na-arụ ọrụ dịka akpọsa. Ihu ọkụ anaghị enwu gbaa iji baa uru maka ịhụ ma na-enwu gbaa iji hụ.
seasucker ịnyịnya ígwè ogbe reviews
Seasucker bike rack reviews - ihe ngwọta na-eme ihe
Kedu ka igwe eji agba ịnyịnya ígwè SeaSucker na-arụ ọrụ? Ugboro mmiri nke SeaSucker na-adabere na ihe abụọ dị mkpa iji mepụta akara ya dị ike: mpempe agụụ na mgbapụta agụụ. Mgbapu agụụ na-ekpopụ ikuku niile site na nkedo agụụ, nke na-eme akara ahụ. Na-arụkọ ọrụ ọnụ, mpempe abụọ a na-enye ohere ikuku SeaSucker ka ọ gbagoo n'ike ya dị egwu.
Zipp nyochaa - otu esi edozi
Ngwongwo Zipp ọ bara uru?
trek lexa nyochaa
Nyochaa Trek lexa - otu esi edozi ya
Nwoke nwoke nwere ike ịnya njem Trek Lexa? Usoro 1 na usoro Lexa yiri ibe ha. Usoro 1 abụghị ụdị nwoke na nwanyị, na njedebe dị elu 1.5 dị obere obere ịnọ na usoro Madone. A na-akpọ usoro lexa aha maka ahụ ụmụ nwanyị, yana njedebe dị elu Lexa SLX dị mkpụmkpụ ịnọ na usoro Silque.
Nyocha Rapha - otu esi emeso
Rapha ọ bụ ezigbo akara? N'ịbụ onye e guzobere na 2004 mgbe onye nchoputa Simon Mottram hụrụ ọdịiche dị n'ahịa maka uwe ejiji mara mma, Rapha bụ onye a ma ama maka ịme ihe mara mma, nke na-egbutu, nke dị elu. Ma ọtụtụ ihe na-ada mbà site na oke ngwaahịa ha dị oke ọnụ, ma ọ bụ echiche nke ịdị nro metụtara ya.
lazer genesis okpu agha
Lazer genesis helmet review - esi ekpebi
Lazer ọ bụ ezigbo akara okpu agha? E nyere Lazer Chiru MIPS kpakpando ise n'ime ise na ule nyocha okpu okpu mkpuchi nke Virginia Tech, na-atụle 13 ebe akara dị ala na-enye nchebe ka mma.
ibu defy elu 2 2018 nyochaa
Nnukwu ihe megidere nyocha 2 2018 - nkọwapụta zuru ezu
Bụ Giant Defy Advanced 2 bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe? Ee, nke a nwere ike ịdị nso ezigbo igwe kwụ otu ebe maka ezigbo 80% nke ndị na-agba n'okporo ụzọ, mana ọ dịkwa oke nke ọma ka ọ bụrụ naanị igwe kwụ otu ebe, maka ọnọdụ niile. Maka ndị na - ebido ebido, ọ bụrụ n’ịchọ inwe obi ụtọ ma ọ pụọ n’okporo ụzọ, okpokolo agba ahụ nwere ikike maka taya 35c, mepee nhọrọ gị iji tinye ngwa ngwa gravel.
Igwe kwụ otu ebe - olee otu ị ga-esi kpebie
Kedu ihe igwe kwụ otu ebe kachasị mma? Ugboro igwe kwụ ala kacha mma enyochare na 2021: diski na rimetsets Hunt 50 Carbon Aero Disc. Kacha mma maka uru. Zipp 303 Firecrest Carbon tubeless diski. Kasị na-atụ aro niile-rounder. Fulcrum ọduọ Zero Carbon DB. Nkume AR30-D. Roval CLX 64 Diski wiilị. Enve SES 5.6 Disc wiilị. untchụ nta 50 Carbon Wide Aero. Black Inc Black Iri atọ wheelset.
sram apex nyocha
Sram apex review - Akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
SRAM Apex ọ dị mma? Ma ọ bụ ezie na Apex nwere ike tufuo USP ya, ọ tufuo amara ya. N'ezie, anyị anwalela ụfọdụ igwe kwụ otu ebe ya na mkpụmkpụ mkpụmkpụ nke Apex n'azụ ya na 10-ọsọ ya, 11-28t cassette dakọtara, yana n'okwu arụmọrụ dị ọcha, ọ dị ezigbo mma.
garmin onu 520 tinyere nyocha
Garmin ihu 520 gbakwunyere nyocha - ajụjụ ndị nkịtị
Garmin Edge 520 gbakwunyere ya? Ọ bụrụ na ị na-achọ kọmpụta okirikiri kọmputa juru na ọzụzụ ma yana atụgharị site na ntụgharị igodo, ọ na-esiri ike ile anya Garmin Edge 520 Plus. Site na ngosi ngosi agba na ibu nke njikọ ihe njikọta, ọ bụ mmeri gbara gburugburu - ọbụlagodi na ndụ batrị ga-aka mma. 9 2019.
sram apex 1 nyocha
Sram apex 1 nyochaa - akwukwo zuru oke
SRAM Apex 1 ọ dị mma? Mgbe anyị tụlere otu SRAM Rival 1, anyị kwuru na ọ na-enye mgbanwe dị mfe, ọtụtụ ihe eji arụ ọrụ, njigide agbụ echekwara, yana mgbakwunye nnukwu diski hydraulic nke SRAM. SRAM anaghị atụ aro na nhazi 1x bụ nhọrọ kachasị mma maka onye ọ bụla, mana na ọ bụ nhọrọ nwere ezi uche maka ọtụtụ mmadụ.
mmanụ a honeyụ stinger jel nyochaa
Mmanụ a stụ stinger gel review - pragmatic solutions
Mmanụ a Honụ Stinger dị mma? Hụ mkpụrụ osisi smoothie ụtọ, mango ekpomeekpo, na chocolate kacha mma kacha mma! Eji m ndị a n'oge m na-agba marathon na na marathon na enweghị nsogbu afọ ọ bụla. Nri na udidi ahụ dị ịtụnanya (ọ dị ka mmanụ a honeyụ) na ọ dị m ka ọ nyere m mgbakwunye ọzọ m chọrọ n'oge agba m.
cannondale caad9 nyochaa
Cannondale omenala9 nyochaa - azịza na ajụjụ a na-ahụkarị
Kedu mgbe Cannondale CAAD9 pụtara? Cannondale CAAD9 4 Igwe kwụ otu ebe - 2010.
boardman anyịnya igwe nyochaa
Boardman anyịnya igwe nyochaa - ịza ajụjụ ndị a
Boardman ọ bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe? Ndị na-agba bọmbụ abụghị ihe mkpofu - a haziri ha nke ọma ma bara ezigbo uru.
Nyocha Zwift - azịza ga-arụ ọrụ
Ego ole ka Zwift na-eri kwa ọnwa? Q: Ego ole ka ọ na-eri iji nọkwasị na Zwift? A: USD $ 14.99 / ọnwa (ma ọ bụ mpaghara ha nhata) gbakwunyere ahịa / ụtụ isi mpaghara dabere na mpaghara / koodu nzi ozi.